Rampage, ahụhụ dị oke egwu nke na - emetụta ihe niile gam akporo arụpụtara mgbe 2012 | Akụkọ akụrụngwa
O yiri ka taa enweghị ụlọ ọrụ ọ bụla raara nye ụwa nke teknụzụ nke enweghị nnwere onwe iji weta ụdị usoro ọ bụla ma ọ bụ ikpo okwu ọ bụla na-enweghị ọdịda. N'oge a, anyị ga-ekwu maka ọdịda dị egwu dị egwu na-emetụta n'ụzọ nkịtị ọ bụla gam akporo ekwentị mere si 2012 ruo ugbu a.
Obi abụọ adịghị ya na anyị na-eche nsogbu ihu igwe ihu, nke, cheta, bụ otu n'ime ihe a na-ejikarị eme ihe na mbara ụwa n'ihi nnabata dị ukwuu na, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bịarutere n'ahịa, ọ bụ ọtụtụ ndị na-emepụta mobile ngwaọrụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere adịghị ike achọpụtara na sistemụ ama ama ama amapụtara nke Google mepụtara, ana m agba gị ume ka gị na anyị nọrọ.
1 RAMpage, nsogbu ngwanrọ gam akporo na-emetụta ọtụtụ nde ekwentị n'ụwa
2 Google kwesiri ịrụ ọrụ taa maka azịza maka RAMpage
3 Enweghị akụkọ na RAMpage na-akpata mbibi n'etiti ndị ọrụ
RAMpage, nsogbu ngwanrọ gam akporo na-emetụta ọtụtụ nde ekwentị n'ụwa
N'okpuru aha nke Rampage Nnukwu ọdịda dị oke egwu pụtara na ọnọdụ ahụ, dịka anyị kwuru, na-emetụta akụkụ dị ukwuu nke ngwụcha ndị ahụ nke ọtụtụ nde ndị ọrụ ka na-eji eme ihe kwa ụbọchị. Nsogbu a na nsogbu a abụghị ihe ọzọ karịa eziokwu ahụ bụ na onye ọrụ dị elu nwere ike iji njehie mee ihe na-enye ohere ịnweta ma gbanwee data nkeonwe nke onye nwe gam akporo ekwentị site na modulu RAM nke ngwaọrụ n'onwe ya.
Banye na ntakịrị nkọwa zuru ezu, gwa gị na otu ndị nyocha chọpụtara nke otu RAMpage ahụ mejupụtara mmadụ asatọ ndị, dịka ha gosipụtara, jisiri ike mepụta ihe nwere ike iji nsogbu a na LG G4. Dika ekwuru na e. nkwupụta ha wepụtara, o doro anya na ọdụ ọ bụla arụpụtara site na 2012 ruo taa nwere ike ịnwe njehie nke sistemụ arụmọrụ n'onwe ya, njehie nke na-abụghị ụdị nke ọnụahịa akọwapụtara ebe ọ bụ na ọ bụghị nsogbu ngwaike.
Google kwesiri ịrụ ọrụ taa maka azịza maka RAMpage
Nke a bụ kpọmkwem eziokwu na njehie a abụghị n'ihi ngwaike nke ndị nrụpụta ụfọdụ mepụtara, nke pụtara na n'ụzọ nkịtị ọtụtụ nde ọdụ na-ekpughere njehie a dị oke egwu. Ọ bụkwa eziokwu na, n'ihi na ọ bụ n'ihi ọdịda na sistemụ arụmọrụ nke Google mepụtara, enwere ike idozi ya n'ụzọ ọsọ ọsọ site na ịmalite nchekwa melite. Dị ka ndị na-eme nchọpụta na-elekọta ime ka ọha mmadụ RAMpage kwupụtala:
Rampage na-agbaji nkewapụ kachasị dị n'etiti ngwa ndị ọrụ yana sistemụ arụmọrụ. Ọ bụ ezie na ngwa n'ozuzu enweghị ikikere iji gụọ data sitere na ngwa ndị ọzọ, mmemme ọjọọ nwere ike ịmepụta ọnya RAMpage iji nweta njikwa nchịkwa wee jide ihe nzuzo echekwara na ngwaọrụ ahụ.
Enweghị akụkọ na RAMpage na-akpata mbibi n'etiti ndị ọrụ
Dika ndi otu ndi nyocha choputara nke a, o doro anya A ga-ewere RAMpage nke ọma karịa ka anyị na-ejikarị ụdị nsogbu ndị a., mgbe ụfọdụ n'ihi ugboro ole ọ na - eme. Onye ọrụ nwere nghọta nwere ike imebi okwuntughe, foto nke onwe, ozi e-mail, ozi na ngwa yana ọbụlagodi akwụkwọ ndị nwere mmetụta karịa echekwara na ọdụ.
Ana m ekwu na ị ga-akpachara anya maka nsogbu a n'ihi na, o doro anya, ugbu a enweghị nchekwa nchekwa dị na Google nke ahụ nwere ike ịkwụsị nsogbu a. Maka ugbu a, naanị ihe anyị maara bụ na ndị nyocha ahụ agwala ụlọ ọrụ America na, na olile anya maka ọtụtụ nde ndị ọrụ, na ihe ngwọta maka nsogbu a nwere ike ịbịarịa ozugbo enwere ike.
Ikekwe na dịka akụkụ dị mma anyị na-ahụ na, ọbụlagodi maka oge ahụ, e nweghị akụkọ na e nwere ike ọgụ na-adị na a dịruru ná njọ karịa onye rụrụ na ngosi ule site na otu ndị na-eme nchọpụta chọpụtara RAMpage, yabụ na anyị anaghị eche ihu mmebi nchebe na-ebute nsogbu n'etiti ndị ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Rampage, a dị egwu ahụhụ na-emetụta ihe niile gam akporo arụpụtara mgbe 2012